Maxay tahay talada uu Rio Ferdinand siiyay Paul Pogba ee ku aaddan mustaqbalkiisa? – Gool FM
Maxay tahay talada uu Rio Ferdinand siiyay Paul Pogba ee ku aaddan mustaqbalkiisa?
Dajiye April 27, 2020
(Manchester) 27 Abril 2020. Halyeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa kula taliyey Paul Pogba inuu isagu iska hadlo, halkii uu u dhaafi lahaa doorkaan Mino Raiola oo ah wakiilkiisa.
Rio Ferdinand ayaa ku sheegay barta Twitter-ka mar uu ka jadlayey mutaqbalka Paul Pogba ee kooxda Manchester United:
“Waan jeclahay Paul Pogba sababtoo ah wuu fiican yahay, waxaan aqaanay markii uu ahaa ciyaaryahan da’ayar ee kooxda Man United ah, si joogta ah ayaan u la hadlaa”.
“Laakiin dhibaatada kaliya ee aan ku qabo Pogba ayaa ah inuu ka hadlo arrimahiisa, halkii uu wakiilkiisa ka hadli lahaa, haddii uu sidaas sameeyo waxyaabo badan ayaa cadaan doona”.
“Waxaan kala hadlay arrimo badan, isaguna wuxuu leeyahay ra’ayi isaga u gaar ah, oo wuu yaqaanaa sida wax looga qabto waxyaabo badan, taasina wax dhibaato ah kuma qabo”.
Waxaa xusid mudan in kooxda reer England ay isku diyaarineyso inay iska fasaxdo, xiddigo ay ka mid yihiin Paul Pogba iyo Jesse Lingard, si ay u sameyso saxiixyo cusub uu ka mid yahay ciyaaryahanka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Halyey Man United ah oo sabab u noqday in Henderson uu diido inuu maaliyada ka baddesho Lionel Messi
Cristiano Ronaldo oo maanta u duulaya dalka Talyaaniga